ဒီပဝါလီပိတ်ရက် အိမ်မှာ ထူးထူးခြားခြားဘာတွေလုပ်စားကြမလဲ - ဒိုးမယ်
ဒိုးမယ်ကိုအားပေးနေတဲ့ အကိုအမတွေကို ဒေပဝါလီ နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မုန့်လုပ်စားနည်းလေးကိုပြောပေးပါမယ်နော်။
ဂျုံမုန့် 200 gm ကို မိမိလိုသလောက်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ပါ ။ ဌက်ပျောသီးကို စိးစီးလေးဖြစ်နေအောင်ချေပေးပါ ။ ဆားနှင့်သကြားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း3ဇွန်းဆီအချိုးကျထည့်ပေးပါ ။ အလုံးလေးတွေကို လိုသလိုလုံးဖို့လက်မှာ ဂျုံမုန့်အနည်းငယ်ဖြူးပြီးလုံးပေးပါ။ ပြီးလျင် ဆီပူပူလေးထဲမှာ ဆီကျက်ပြီဆိုမှ ထည့်ကြော်လို့ရပါပြီ ။ ဆိပေါက်မှာတော့မပူနဲ့ ဆီပူရင် မပေါက်ဘူးနော်။ သိဘို့
၂ . ဆန်လုံးကြော်
ဆန် တပြည်ကိုရေဆေးပါ ။ အခြောက်လှမ်းပေးပါ။ ဆန်တွေရေခြောက်ပြီးအနည်းငယ် ကျွတ်လာတဲ့အချိန် အမှုန့်ကြိတ်ရန်အတွက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပေးပါ ထန်းညက် 50သားကို ကြို့ါပြီးလျှင်ဆီများများနှင့် စိမ်ထားပေးပါ ။ ဆီစိမ့်ဝင်သွားလျှင်ကြိုက်သလိုလုံးပြီးကြော်နိုင်ပါပြီနော်။
ကုလားပဲခြမ်း 3ထုပ်ကို အုန်းသီး၂လုံးနှင့် နှံနေအောင်ရောသမမွှေပေးပါ။ ဂျုံမုန့် ဖြင့်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီရောမွေပါ။ အလုံး သေးသေးလေးတွေလုံးပြီး ကြော်ပေးပါ။
၄. မပဲကြော် / ဘရာကြော်
မပဲအထုပ် ၃ ကို အခွံကြွတ်ဝယ်ပါ ရေစိမ်ထားပါ ရေကျက်အေးနဲ့စိမ်ပါနော် ရေစိမ်းနဲ့မစိမ်ပါနဲ့ ပြီးလှင်ကြိတ်ပါ. ကြက်သွန်နီ ၂လုံးနဲ့ ရောကြိတ်ပါ ပိုပြီးအရသာရှိပါတယ်။ ဂျင်းရည်လေး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခန့်ထည့်ပေးပါ။ ပြစ်ချွဲချွဲဖြစ်လာပြီဆို ကြော်လို့ရပြီနော် ။
၅ . မန်ကျည်းဆော့ပြုလုပ်နည်း
မန်ကျည်းသီး အချဉ်ကို ရေဖျော်ပါ ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခန့်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်အောင် မွှေပေးပါ။ ပြီးလျှင် နံနံပင်၁စည်းကိုနုတ်နုတ်စဉ်းပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ရော စပ်ချင်ရင်ပိုထည့်ပါနော်။ မန်ကျည်းချဉ် ရပြီဆို ခုနကကြော်ထားတဲ့အကြော်လေးတွေနဲ့ သန့်သန်ရှင်းရှင်း စားလို့ပါပြီ ကယ် ဒေဗဝလီနေ့မှာ မုန့်လေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတသိုက် အတင်းလဲတုပ်ရင်း အစားလဲစားရင်း အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရအောင်ဒိုးမယ်က စေတနာ မေတ္တာနဲ့ လုပ်နည်းလေးတွေပြောပြလိုက်တယ်နော်